Kutheni uEduardo Ferreira? -Ukubalwa ukuya eBukumkanini
Ukususela ngoFebruwari 1997 kude kube ngumhla, izibhengezo ku-Eduardo Ferreira zenzeka ngomhla we-12 kwinyanga nganye kwaye ngamanye amaxesha ngamanye amaxesha. Ebekwe ibala ngoFebruwari 2, 1996, u-Eduardo wadibana nosapho lakwaMartins, ononyana wakhe u-Alceu Martins Paz Junior (owazalwa ngo-1977) naye wayenamava angaqondakaliyo, xa wabona iNtombikazi nge-9 kaJulayi ka-1996. wafumana izoyikiso zokubulawa, kubandakanya namalungu osapho lwakhe, kwaye bangena makhaya, ekugqibeleni bazinza eSão José dos Pinhais kwiphondo laseParaná ngo-1997, apho kuye kwakhiwa khona indawo engcwele.
UMary uvela kwezi zimbonakalo njengo "Rosa Mystica", isihloko athi wabonakala kuso ukuba ngumongikazi uPierina Gilli eMontichiari-Fontanelle (1947), umsitho apho imiboniso yaseBrazil ku-Eduardo noJunior bebhekisa kuyo kaninzi. Imibonakalo iphawulwe linani elikhulu lezinto ezingachazwanga ezifana nezi zibonwa kwezinye iisayithi ezifanayo: ukukhutshwa kwegazi kumfanekiso weNtombikazi (njengaseCivitavecchia okanye iTrevignano Romano), "umdaniso welanga" (njengaseFatima okanye iMedjugorje), umfanekiso kaMariya ngokungaqondakaliyo "ushicilelwe" kwiipalali (njengaseLipa ePhilippines ngo-1948) ... Kwimiyalezo, sikwafumana izingqinisiso kwiimpawu ezininzi zaseMarian zangaphambili. Abanye babo baye bagxothwa yiCawe (Montichiari, Ghiaie di Bonate, Biding, Kerizinen ...), kodwa nangona kunjalo batsale umdla okhulayo kwicala labaphandi abanzulu abachaphazelekayo ekumiseni inyani yezembali kunye nokubuyisela kwimeko yesiqhelo iimfihlakalo ezinokuthi zigwetywe ngokungekho mthethweni .
Imiyalezo evela ku-Eduardo Ferreira
Eduardo -Guqulela kuThixo
Funa uxolo, uhlwayele uxolo.
UEduardo - Roulette yaseRashiya
Thandazela abo bangekalwazi uthando lukaThixo.
Eduardo-Amaxesha anzima sele elapha
Musa ukuvumela ukuthanda izinto eziphathekayo kukulawule.
... kodwa emva koMqondiso oMkhulu, akuyi kuba nexesha eliseleyo lokuguqula.
U-Eduardo – Wogqitha iMida yeSiphene
Guqula imikhwa kunye nobomi bakho.
Eduardo - Ngaba lixesha lokugqibela likaFrancis?
Inceba isemnyango wakho.
Umqondiso wezi ziphumo zibuhlungu sele ubonakele.
Nguwe ohlala wohlukane naye.
U-Eduardo -Ukugculela iiNkangeleko
Uninzi lusavukela kwaye lunyelisa iimbonakalo zalo!
Uphawu olukhulu eMedjugorje lusondela ...
← Kutheni uMarco Ferrari?
Kutheni uFr. UMichel Rodrigue? … →